IMicrosoft Outlook yokuqaliswa kwe-mac "okwenziwe lula" ukuyila kwakhona, ngokufana nesicelo se-iOS | Ndisuka mac
IMicrosoft Outlook yokuqaliswa kwe-mac "eyenziwe lula" uyilo kwakhona, olufana nesicelo se-iOS
Imagazini eyaziwayo esengozini ityhile iinkcukacha zento entsha yeMicrosoft Outlook yeMac.Ngamagama kaMicrosoft, lo ngumbono yenziwe lula, kufutshane kakhulu kuhlobo lwe-iOS. Ingena kulungelelwaniso olwenziwa nguMicrosoft kunye nokusetyenziswa kweOfisi 365, apho ifomathi yezicelo iyahlangana, nokuba iqonga livela phi. IMicrosoft yenza olona hlobo lubalaseleyo lufumaneke kubasebenzisi beMac (ubuncinci obonakalayo) kuba abantu abaninzi abanempembelelo basebenzisa ii-macOS kwaye bafuna ukubonisa ujongano lwabo kwiikhompyuter zeMac.
Kule nqaku, siza kufumana ezinye izikrini zesikrini ze-Outlook ye-Mac. Yonke into ibonakala ibonisa ukuba iya kuba nefayile ye- bar ngentando yakho ngokupheleleyo. Kuyo sinokufumana eyona misebenzi ibalulekileyo, leyo sifuna ukufikelela kuyo kwangoko, ngohlobo lokufikelela ngokuthe ngqo. Sihamba siye kwikholam yasekhohlo. Kuqala siza kufumana ifayile ye- iiakhawunti ezahlukeneyo: ubuqu, umsebenzi, iakhawunti yesibini, njl. nasezantsi emazantsi ukufikelela kweklasikhi: imeyile, ikhalenda, abafowunelwa, izikhumbuzo kunye namanqaku. Iimpawu zisikhumbuza okuninzi kwabo babonwa kwisicelo se-iOS.
Ukuqukumbela ujongano, bonisa ukuba iyayifumana uphuculo olukhulu lwekhalenda. Ngoku ukulawula ukuqeshwa kunqabile, ngenxa yokubona okungcono.
Kodwa utshintsho alwenzeki kuphela kumaleko wokuqala. Ingaphakathi lifumana notshintsho. Inkqubo ye- ukukhangela kuya kukhawuleza kwaye ngaphezu kwayo yonke into ichanekile. Ukongeza, ibhokisi yokukhangela ifumana ukufikelela, njengoko ikwindawo efanayo neMeyile okanye i-Finder kwi-macOS, ngasekunene.
Icandelo elingalunganga kukuba okwangoku sishiyekile nomnqweno wokuzama ukuphuculwa kwabaxhasi be-imeyile, kuba inkampani ayinikanga zinkcukacha ngokusungulwa. Eyona nto iphambili kwinkampani kukufana kwesicelo phakathi kwamaqonga ahlukeneyo kwaye kule nto bayabhaptizwa. Okwangoku, abasebenzisi beMac kuya kufuneka bahlawulele ukuphuculwa kwexesha elizayo, njengokupheliswa kwee-imeyile, ukutyibilika kwibar yomyalezo kunye nomsebenzi wokufaka iitafile kwii-imeyile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMicrosoft Outlook yokuqaliswa kwe-mac "eyenziwe lula" uyilo kwakhona, olufana nesicelo se-iOS
Yenza ubuchule bakho kunxibelelwano lwasentlalweni ngeLebhu yeendaba yezeNtlalo, ngoku ethengiswayo
I-Apple isungula i-beta yesithathu ye-tvOS 11.1 kunye nabaphuhlisi be-watchOS 4.1